Staff Affair Department
၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ၏ ရှုခင်းများ
June 16, 2016 by tutgieditor - No Comment	နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) မြင်ကွင်းကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါသည်။ ရှမ်းတောင်တန်း နှင့် အပြိုင်လှပနေတဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( တောင်ကြီး) […]…
၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲ
June 16, 2016 by tutgieditor - No Comment	၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဆရာဆရာမများမှ ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲ ခဲ့ကြသည်။ […]…
၂၀၁၅-၂၀၁၆ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ပါမောက္မချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီး
June 16, 2016 by tutgieditor - No Comment	၂၀၁၅-၂၀၁၆ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ပါမောက္မချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တွင် CIVIL major အသင်းမှ ချန်ပီယံ ဆုကို […]…
In Service Teacher Training Course No.(2)
May 20, 2016 by tutgieditor - No Comment	In Service Teacher Training Course No.(2) will be held on […]…
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား
March 14, 2016 by tutgieditor - No Comment	နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ၏ ၁၃ ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားမြင်ကွင်း ဘွဲ့ယူမောင်မယ်များ…
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် မှ ဆွေးနွေးစဉ်
March 14, 2016 by tutgieditor - No Comment	နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကျောင်းများ စုစည်းဖွင်‌့လှစ်ရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် မှ ဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်းများ…
၂၀၁၅ ခုနှစ် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)သို့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦး ရောက်ရှိစဉ်
March 14, 2016 by tutgieditor - No Comment	ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာကိုကိုဦးမှ လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်…
Latest News	၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ၏ ရှုခင်းများ	June 16, 2016 နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး) မြင်ကွင်းကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါသည်။ ရှမ်းတောင်တန်း နှင့် အပြိုင်လှပနေတဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( တောင်ကြီး) […]… News	Read More ၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲ	June 16, 2016 ၂၀၁၄-၂၀၁၅ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ဆရာဆရာမများမှ ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲ ခဲ့ကြသည်။ […]… News	Read More ၂၀၁၅-၂၀၁၆ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ပါမောက္မချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ကျင်းပပြီးစီး	June 16, 2016 ၂၀၁၅-၂၀၁၆ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး) ပါမောက္မချုပ်ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တွင် CIVIL major အသင်းမှ ချန်ပီယံ ဆုကို […]… News	Read More Search for:
Exam Time Table	၂၀၁၅-၁၆ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)၏ သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ	Services	Certificate Verification
Warning: unlink(D:\_webprojects\_Web Hosting\_tutgi.most.gov.mm/wp-content/errorfix/storage.php): Permission denied in D:\_webprojects\_Web Hosting\_tutgi.most.gov.mm\_wp-content\_plugins\_wp-error-fix\_vendor\_ErrorFix\_Storage.php on line 86